Mareekanka oo Aduun Lacageed Dul dhigay Laba Qof oo kusugan Gudaha Wadanka Soomaaliya oo katirsan - iftineducation.com
iftineducation.com – Waaxda dowlada Maraykanka u qaabilsan argagixisada ayaa dhaqaalo dul dhigtay madaxa labo ruux oo u dhalatay dalka Sudan oo ay sheegeen inay ku sugan dalka Soomaaliya.
Dowlada Maraykanka ayaa sheegtay in 5 Milyan oo doolar ay siin doonto ruuxii warbixin ka keenaa labo muwaadin oo Suudaanees ah ,kuwaasi waaxda dambi barista Maraykanka ay sheegeen inay ku sugan meel ka mid ah Soomaaliy,wallow aysan cadeyn halka ay tahay.
Dadka dowlada maraykanka ay doondoonayaan ayaa kala ah , Abdelbasit Alhaj Alhasan Haj Hamad and Mohamed Makawi Ibrahim Mohamed kuwaasi oo la sheegay in 2008 New ay dileen diblumaazi ka tirsanaa hayada USAID oo lagu magacaabik John Granville iyo muwaadin Sudaanes ah Abdelrahman Abbas Rahama.
“si rasmi ah uma ogi halka ay ku sugan yihiin Mr Makawi iyo Mr Hamid,sidaa dared meel uun bey ku sugan yihiin,waxaan ku dhiiro gelinaynaa tan in dadkii helaa xogtooda inay nala soo hadlaan,si ay noogu sheegaan war bixin ku saabsan xitaa midkood dadkaasi”Sidaasi waxaa yiri sarkaal ka tirsan waaxda la dagaalanka argagixisada Marayka.
Sanadkii 2012-kii ayay shaqsiyaadkaan iminka Mareynkanka liiska ku daray xabsigii ka baxsadeen,iyagoo markaasi dil u geystay sarkaal ka tirsanaa Poliiska kuwo kalena dhaawacay.
Daawo Dagaal Qosol Badan oo Dhexmaray Yaanyuuro & Tuko (VIDEO )